Mmiri ezumike bụ mgbe ezumike ma hazie ya ka mmadụ wee nwee mmasị na ihe ọ bụla
Oge ezumike bu mgbe ezumike na ichota ya ka onye obula nwee anya. Echiche nke ụbọchị ezumike nke abụọ, dịka ọtụtụ akwụkwọ ederede ndị ọzọ, sitere na West. N'ebe ahụ ruo ogologo oge maara na ndị di na nwunye na-abụghị afọ mbụ ọnụ, ọ bara uru site n'oge ruo n'oge iji nọrọ otu izu ma ọ bụ abụọ naanị, na-apụ n'ụlọ, ọkacha mma na ụfọdụ ndị na-eme njem na ezumike niile.
N'ezie, "ezumike nke abụọ" a na-akpọkarị njem mgbe agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ahụ gasịrị, mgbe ndị di na nwunye na-ahazi ememe alụmdi na nwunye n'ezie, bụ nke ha na-aṅụ iyi ọzọ ka ha hụrịta ibe ha n'anya ma gbanwee mgbanaka. N'ọtụtụ ebe ntụrụndụ ndị dị otú ahụ ememe bụ otu n'ime ọrụ a na-enye ndị njem nleta. N'agbanyeghị nke ahụ, ebee ka ọ ga-adị mma ka ị na-emefu ezumike ọhụụ?
Otú ọ dị, dịka nkwonkwo ndụ nwere ike ime n'emeghị agbamakwụkwọ, na ụbọchị nke abụọ - n'emeghị ememe pụrụ iche. O zuru ezu iji kpebie ịga ebe dị anya site na ụwa, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nanị ná mpụga obodo ahụ, gbanyụọ igwe ma tinye oge niile naanị na ibe gị. Uru nke ezumike dị otú ahụ nwere ike ibu nnukwu. Nke ukwuu ka nke ahụ wee sị, na Malaysia, ndị isi obodo nke Terengganu mara ọkwa na ha ga-akwụ ụgwọ ezumike ụbọchị niile na ndị di na nwunye dị nso na ịgba alụkwaghịm. Otú ọ dị, ịnweta ezumike dị otú ahụ n'efu, ọ gaghị ezuru naanị ikwupụta nzube gị ịkewa - ọ dị gị mkpa ịnwale ule pụrụ iche. Dị ka ndị nnọchianya ndị nnọchiteanya nke Malaysia, ha gara maka ya n'ihi na mmebi nke ezinụlọ "na-akụda ụmụ" na "nwere nnukwu nsogbu na ọha mmadụ."
Enweghị minit ise, ịgba alụkwaghịm bụ n'ezie ọnọdụ dị oke njọ, ebe a ka otu njem na Maldives adịghị edozi nsogbu ahụ. Ọ dị mfe nhazi nke abụọ (na nke atọ na nke anọ), na-eche na na ezinụlọ "ihe na-agazighị." Ọ bụghị ihe mberede na ndị inyom bụ ndị na-ebido njem ndị dị otú ahụ: n'ihi inwe mmetụta uche ka ukwuu, mmekọahụ mara mma na-emekarị ụzọ abụọ dị ka ụdị "barometer" nke na-eme ka ọ dị obere mgbanwe na ọnọdụ ihu igwe. Otú ọ dị, mkpebi ahụ ị ga-ahapụ ga - ejikọta ọnụ, dịka mkpebi ndị ọzọ gbasara abụọ - nke a na - agaghị ekwu.
Ọ bụ ndị nne na nna na-ahụ maka ọhụụ nke abụọ na-abanye na ya - mgbe ha hụrụ na enweghi nsogbu miri emi na ụzọ abụọ ahụ, ma ọ bụrụ na a gbazie ya, enwere ike ịmalite. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ahịa aghaghị ikwenye na ọ bara uru ịnwale, n'ihi na ha malitere ịjụ ajụjụ: "Gịnị ka anyị ga-eme ebe ahụ? Kedu ihe m ga - enweta na nke a? ". A na-ajụ nke a site na ndị mmadụ, ndị pragmatic na-achọ uru na ihe niile. Ya mere, ha na-ewepụ mmetụta ahụ, ụwa nke uche dịka ihe na-adịghị mkpa. Na ebe a, ọ ka mma ịdabere na ahụmahụ, ọ bụghị na nkwenkwe: ebe ọ gbalịsiri ike n'otu oge ezumike nke na-adịghị ebu ihe mgbaru ọsọ pragmatic, ọbụna ụdị nsị ndị a "kụrụ" ya dị ka ọgwụ.
Mmetụta nke mmetụta bụ otu n'ime isi ihe mere na-eduga ndị di na nwunye n'ọfịs nke ndị ọkà mmụta uche na ndị njem na-achọ ebe ntụrụndụ maka ntụrụndụ. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ afọ nke ibikọ ọnụ ọnụ, nkwurịta okwu na mmekọrịta dị ntakịrị, ike ọgwụgwụ site na nsogbu kwa ụbọchị bụ, ọ bụrụ na enwere ụmụ, mgbe ahụ, ndị ọzọ di na nwunye anaghị ahapụ oge maka onwe ha na maka ibe ha. N'ezie, nke a agaghị emetụta mmekọrịta mmekọahụ. Maka inwe mmekọahụ mgbe ọtụtụ afọ nke alụmdi na nwunye gasịrị, e nwere ọbụna okwu pụrụ iche pụrụ iche - mmekọahụ. Mmekọahụ bụ ụdị ndụ nke inwe mmekọahụ, mgbe ndị mmekọ mara tupu nke a emee ka omume mmekọahụ na-agafe tupu ịmechaa.
A na - emekarị ọnọdụ dị otú ahụ na ọnwa mbụ nke ndụ nkwonkwo, mgbe mmadụ abụọ na-ehi ụra mara ibe ha, were map nke ebe ndị na-adịghị ọcha, kọọ ụzọ iji nweta orgasm. Site na ikpe na njehie, a na-achọpụta usoro a na-enweghị nsogbu: ebe ị ga-eme mkpanye, ebe iji susuo ọnụ, na oge oge ọ ga-aga, iji nweta obi ụtọ a na-ejide n'aka. Ma a na-ejikarị akwukwọ a eme ihe, ngwa ngwa ka obi ụtọ ahụ gwụsịrị: mmetụta nke na-emeju ma ọ bụ na mmegharị agabiga, ọchịchọ obi ụtọ nke nyocha, ọṅụ nke nchọpụta ga-apụ n'anya. Nke a bụ ebe ebe ọhụụ nke abụọ ga-abịa napụta, onye maara ihe nke maara nke ọma na ihe ọhụrụ ọ bụla bụ ihe ochie a na-eli n'okpuru ihe ndị na-adịghị mkpa.
Uche nke uche
Ọtụtụ mgbe, ịkọwa mmetụta ha mgbe ọtụtụ afọ nke alụmdi na nwunye gasịrị, o juru di na nwunye ahụ anya, sị: "Olee ebe ịhụnanya funahụrụ? O yiri ka ọ na-aga ebe ọ bụla, ma gịnị mere na ọ bụghị dị ka ọ bụ tupu? "Mmetụta adịghị akwụsị kpamkpam ma ọ bụrụ na ha bu ụzọ nwee ike zuru ezu ma dị omimi. Naanị ịlụ di na nwunye, ụwa anyị na-ahazi dị iche iche, anyị onwe anyị bụ maka ibe anyị - ọ bụghị nwoke na nwanyị, naanị ndị nọ n'ụwa dum, ma di na nwunye (ọ bụrụgodị na alụmdi na nwunye bụ obodo). Mmekọrịta "nwoke-nwanyị" bụ ịhụnanya sitere n'okike, na "di-nwunye" bụ ụlọ, mmekọrịta. Mmezu nke ọrụ na ọrụ kwa ụbọchị juputara na oge anyị na anyị ezughị igosipụta mmetụta anyị. Na isi ihe nke ejikọtara ụzọ abụọ ahụ, gafere n'ọdịnihu dị nso, ọ bụ ezie na ọ gaghị apụ n'anya. Ịhụnanya enweghi, ma ọ dịghị ebe na oge ọrụ anyị. N'alụmdi na nwunye, ọ dịghị ebe a ga-eji eme ememme nlekọta - ha abaghị uru, ebe ọ bụ na mmadụ abụọ achọtawo ma merie onwe ha. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye eziokwu ahụike ahụ na mgbe ọ dị afọ ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, mmepụta nke hormones na-ebelata - ya ejula gị anya na inwe mmekọahụ mgbe afọ iri nke alụmdi na nwunye abụghị otu ihe ahụ na-enye nwa oge.
Na ezumike ezumike, onye ọ bụla ọzọ na-aghọwanye ihe - nanị n'ihi na ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ kwa ụbọchị, ha na-ahapụ ndụ ọzọ. E mezie ebe ememe ememe na ihe ngosi dị iche iche. Ị nwere ike inye ibe gị, ihe ịrịba ama ọ bụla anya, na-awagharị n'okporo ámá ndị dị warara nke obodo ndị a na-amaghi, na-asa mmiri ọnụ, na-achọ ịnọ naanị n'ụsọ osimiri n'ehihie ... Ọtụtụ mgbe, ndị di na nwunye na-enwe obi ụtọ ịchọpụta na n'ọnọdụ dị otú a ọchịchọ nke ime ka ibe ha nwee obi ụtọ ike, dịka na ọnwa mbụ ị maara. Ọbụna ịma ụda na mmetụta uche nke ụmụ mmadụ nwere ike imeghe ụzọ, n'azụ nke a na-ejighị obi ebere kwuo ya.
Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-enwe ọlụlụ na nzube nke "mmetụta ndị na-emenye ụjọ" di na nwunye nwere ụmụaka tozuru etozu amalitela: enweghị mkpa ịzụ ụmụ na-eme ka oge na-agafe. O dokwara anya ihe mere ejiji maka ọhụụ nke abụọ wee bịa site na West. Ọ bụ naanị na a na - ewepụ ụmụ ha na ndụ onwe ha n'oge mbụ - ọ bụ naanị mgbe oge niile a kwụrụ ụgwọ, ma ị nwere ike iji ego na - akwụ ụgwọ na - akwụ ụgwọ onwe gị. N'ihe gbasara inwe mmekọahụ, enweghi ihe ngosi na-emetụ ya n'ahụ. Mgbe e nyere egwuregwu egwuregwu ọkara elekere elekere ụtụtụ Sunday, ma ọ dịkarịa ala n'oge elekere, echiche efu na-amalite ịrụ ọrụ zuru oke - ọbụlagodi na mbụ ọ na-efu site na nnwere onwe dị otú ahụ a na-enwetụbeghị ụdị ya ugbu a. N'ezie, ọtụtụ ndị iji nweta ahụmahụ dị ịrịba ama, ọ bụ naanị iji gbanwee ọnọdụ ahụ: site n'àkwà alụmdi na nwunye na jacuzzi jimuz, osimiri zoro ezo, ụlọ ntu n'ime oké ọhịa, ọbụna ogige ụgbọ oloko ma ọ bụ ụlọ mposi ụgbọelu. Mgbanwe dị n'ọnọdụ ahụ na-atọ ụtọ mgbe nile, ọnụnọ nke pasent nke adrenaline maka ọtụtụ ndị na-erite uru.
Anyị nwere ike ikwu, ya mere, anyị na-alaghachi na ọnwa mbụ nke mara na ọzọ nnwale, ma ugbu a, anyị aghọela okenye ma nweekwu ahụmahụ, anyị enweelarị ike ịkọrọ onye òtù ọlụlụ ihe anyị chọrọ n'ụra. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ga-eme nke a ọ bụghị site na ederede ziri ezi, ma site na ikiri nkwonkwo nke ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ (na ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọ na-abụkarị ihe na-asọ oyi n'etiti usoro TV), na-agụpụta magazin, na-agụpụta akwụkwọ "ọkụ" na ịgụ akwụkwọ, E nwere obodo na mba ndi mmadu na - enweghi ike igabiga ihe ndi ozo di egwu - Paris, Amsterdam, Thailand ...
Na mgbakwunye, na ezumike, ọ ga-ekwe omume iwepụ uche nke ụwa nke na-asọ oyi, nke na-agbasi mbọ ịkpọ anyị na mobile adịghị agbapụ n'oge oge kachasị mma. Mmetụta nchegbu na egwu, nke anyị na - enweghị ike iwepụ n'oge ọgba aghara nke ndụ kwa ụbọchị, abaghị uru, n'ihi na oge ezumike bụ nkọwa nke ọnọdụ dị ka nchekwa ma dị mma dị ka o kwere mee. Karịsịa, ọ na-enye aka ime ka agụụ mmekọahụ mara mma dị jụụ. Nwanyị na - enwe mmetụta nke agụụ mmekọahụ, n'adịghị ka nwoke, nwayọ nwayọ, a pụkwara ịpụ ya na steeti a n'enweghị nchegbu ọ bụla. Ụmụ nwoke, ọ bụ ezie na ha mere ndokwa dị iche iche, ha dị nnọọ ka anyị na nke a, dịka ha kwenyere ugbu a. Ee, onye nwere ahụ ike na - enweta ngwa ngwa na ngwa ngwa, ma okwu onye nlekọta na - enweghị nlekọta na onye nlekọta ma ọ bụ oku na - akpọ ya ga - egbochi nwoke nwere obi ike n'ikike mmekọahụ yana ọbụna ọchịchọ nke inwe mmekọahụ. Ya mere, iwu ahụ "gbanyụọ igwe!" - maka ụyọkọ ígwè nke abụọ. O doro anya, Intanet dị mma ịghara ịga, ma gụọ akwụkwọ akụkọ. Ma n'eziokwu, ọ dị mma, - ọ bụghị iji dọba n'ime ezinụlọ nke nsogbu na-arụ ọrụ n'ụdị oge maọbụ na-ekwurịta okwu azụmahịa na ekwentị ụlọ n'enweghị nkwụsịtụ na nri abalị.
A ada na ude mmanụ na mmanụ otite
Ọ dịghị onye ga-enwe ike imeri ezumike ọhụụ dịka anyị enweghị ike. Nke mbụ, anyị enweghị njikere ịhapụ nsogbu nke "ụwa dị n'èzí". Nke a na - emetụta ọ bụghị naanị ndị ọchụnta ego, ma ndị nne na - enweghị ike, ọbụna mgbe ha na ndị ị hụrụ n'anya na - enwe mmekọahụ na - echegbu onwe ha: olee otu nwatakịrị dị? Ọbụna ma ọ bụrụ na "nwata" ahụ dị afọ iri na ụma ma mara otú e si elekọta onwe ya. Iji gbochie ọnọdụ dị otú ahụ, ọ bụ ihe dị mma, iji dozie ihe niile tupu njem ahụ: iji dozie ihe mgbochi nke ọrụ, iji dozie nwa - n'ime ogige okpomọkụ ma ọ bụ ndị ikwu. Ma ihe kachasị - ma ihe siri ike - bụ ịgbalị, n'ikpeazụ, ịghọta na ọ gaghị ekwe omume ịchịkwa ihe nile dị n'ụwa, ma na-ezuru onwe gị.
Ọtụtụ n'ime anyị na-achịkwa iji soro ha na njem njem ịhụnanya na ụyọkọ nchegbu na egwu na nkwụghachi maka ndị fọdụrụ na ndụ nkịtị. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-atụ ụjọ na ị na-akpa àgwà n'àkwà n'emeghị ihe ọ bụla: gịnị ma ọ bụrụ na nwoke gị na onye ị bụ mgbe ọ dị umeala n'obi ga-ele gị anya dị ka ihe na-adịghị mma? Na mberede, ọ ga-atụle ọchịchọ gị dị ka ihe rụrụ arụ? N'ezie, dị ka omume na-egosi, ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị juru gị anya, mgbe ahụ nke a bụ nnọọ ihe ijuanya. O yikarịrị ka ị ga-enwe obi ụtọ ịmara ihe ị ga - abụ ma ọ bụrụ na ịkwesighi ịrụ ụfọdụ ọrụ na ndebiri.
Ma, ọ na - eme na "egwuregwu egwuregwu" dị otú ahụ na - eme ọ bụghị nanị n'ihe ndina, kamakwa na ndụ. Anyị nwere ike ịkọwa di na nwunye nwere obi ụtọ na ndị nne na nna na-ahụ n'anya, ma na nzuzo anyị enweghị ihe ọ bụla ga-agwa ibe anyị. Ọtụtụ mgbe, a na-ekpughe nke a n'ememe ọhụụ nke abụọ, mgbe ọ dị mkpa ịrụ ọrụ na-apụ n'anya, ọ ga-edozikwa na n'otu oge anyị ejikọtara ọnụ ọ bụghị site na mmetụta, kama site na ọrụ ọnụ, ọmịiko enyi ma ọ bụ nzụlite nwatakịrị. Ma mgbe ememe ndị na-eme ka eziokwu anyị kwụsị - anyị na-ahụ na n'azụ ha enweghi ihe efu. Ya mere, ebe a, enwee ike ịmalite ime mmụọ na-adabere na ya: kama karịa ọtụtụ afọ obi ụtọ, anyị nwere usoro ịgba alụkwaghịm n'ihu anyị. N'aka nke aka, nke a abụghị ihe na-atọ ọchị, na nke ọzọ - a amaghị oge ole alụmdi na nwunye ga-ejikọta na njikọta ibe ya ga-adịru?
Ịlụ di na nwunye site na ụlọ ọrụ alụmdi na nwunye
Nchegbu tupu ịlụ di
Ịgụ oriri agbamakwụkwọ
Otú ị ga-esi lụọ onye mba ọzọ bara ọgaranya
Ihe nzuzo nke agbamakwụkwọ mara mma ma nwee ọganihu
Anyị na-etinye ego nchekwa agbamakwụkwọ dị mma
Otu kachasị mma ịhọrọ ụbọchị na ọnwa maka agbamakwụkwọ
Ịsa ahụ mbụ nke nwa, ndụmọdụ
Esi zụlite ụmụ ka ha wee too ghọọ ezigbo mmadụ
Mmega ahụ iji mụbaa ọkpụkpụ ara
Ihe omume akwukwo maka nlekọta ahu na Yves Rocher
Horoscope: Afọ nke Tiger maka ebule ahụ
Ndị a ma ama nke Ụlọ-2
Efere ọka na garlic
Nri chiiz na kichia lemon
Stuffed Santa Fe nsen
Xenia Borodina anaghị agụ ego ego di ya
Mmiri horoscope nke mmiri maka akara zodiac
Ọdịdị anụ ahụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Ịgba ma ọ bụ iṅomi mmekọahụ
Otu esi etinye osisi ime ụlọ
Tubules na ude
Mmetụta nke àgwà ọjọọ na ụmụ
Njirimara ọgwụ dị egwu nke saber